Amerika : Niditra amboletra tao amin'ny Capitole ireo mpomba an'i Donald Trump
jeudi, 07 janvier 2021 07:14
Sary nindramina - AFP
Taorian'ny fifidianana ho filoham-pirenena tany Amerika, izay nitarika ny kandida Joe Biden manolona ny filoha amperin'asa Donald Trump, dia mivory ankehitriny ny kongresy amerikanina, hanamarina ny vokam-pifidianana, izay vokatra efa voamarina isaky ny Etat mandrafitra an'i Etats-Unis.
Raha tokony ho fombafomba sisa ity fanamarinana (certification) farany ataon'ny Kongresy ity, dia nikabary ny Filoha amperin'asa Donald Trump fa tsy manaiky ny voka-pifidianana, fa feno hala-bato raha ny nambarany, ka manainga ireo mpiara-dia aminy rehetra hanohitra izao voka-pifidianana izao.
Niantso ireo senatera repoblikanina miaraka aminy izy hitsipaka izany fanamarinana izany ao amin'ny Kongresy. Ny filoha lefitra Repoblikana, Mike Pence moa dia efa nilaza fa tsy manohitra ny fanamarinana ny naha lany ho filohan'i Amerika an'i Joe Biden.
Nirohitra nihazo an'i Capitole, izay toerana misy ny Kongresy, toerana manan-tantara vohitry ny fahefana amerikanina anefa ireto mpomba an'i Donald Trump ireto, ary nanao amboletra niditra ny toeram-pivoriana misy ny Kongresy. Nirefotra ny lakrimozenina, niditra an-tsehatra ny miaramila, navoaka aingana ary narovana manokana ny filoha lefitra Repoblikana, Mike Pence, nampanaovina masque à gaz izay efa tao ambany seza avy ireto solom-bavambahoaka sy senatera.
Vokany, maty vehivavy iray, napetraka ny tsy fahazoana mivezivezy alina tao Washington. Tsy nahasakana ireto mpomba an'i Donald Trump anefa izany.
4ora taty aoriana, dia nitohy indray ankehitriny ny fivoriana.
Raisin'ireo mpanara-baovao ho fanonganam-panjakana mihitsy izao zava-misy izao, ary ny kandida Joe Biden moa dia nilaza fa fanitsakitsahana ny demokasia ary tsy fahita taty Etats-Unis hatramin'izay izao zava-misy izao.
Ny Filoha vaovao amerikanina moa dia tokony anao fianianana, ary mandray ny asany ny 20 janoary ho avy izao. Noho ny fepetra ara-pahasalamana moa dia atao an-davitra izany fianianana na "Inauguration Day" izany.